EVY's Kitchen: Christmas Fruit Cake ( ခရစ်စမတ် လက်ဆောင်)
Posted by Evy at 12:50 PM
လှပြီးဆွဲဆောင်မှုကောင်းလိုက်တာ။ စားလို့ ကောင်းမှာတော့သေချာတယ်။
အက်ဗီ့မုန့် လေးတွေကအမြဲလှလို့ ဘယ်တော့လာကြည့် ကြည့် မရုိုးဘူး။
Thanks so much for sharing the recipe. The tricky part for me always when I bake is to do frosting and icing the cake. Here in this cake, when I put almond paste on the cake will not be easy :D. I love your baking and to read. Haveahappy New Year 2012!!
လုံးဝ မလုပ်တတ်လို့လုပ်ပြီးသားပဲ စားခဲ့ပါတယ်ရှင်
ဒါလဲ ပညာတစ်မျိုးပါပဲ မုန့်ကစားဖို့ထက်
Merry Christmas and Happy New Year.ပါရှင်
အရမ်းလှတဲ့ ခရစ္စမတ်ကိတ်လေးပဲ...။ မုန့်လုပ်နည်းကိုဝေမျှပေးလို့ ကျေးဇူးးပါ။။
Christmas က ပြီးပြီဆိုတော့ နယူးရီးယားကျန်သေးတယ်..